Football Khabar » युभेन्टसले बार्सिलोनालाई यसरी फर्कायो ‘अपमान’को मिठो जवाफ !
युभेन्टसले बार्सिलोनालाई यसरी फर्कायो ‘अपमान’को मिठो जवाफ !
इटालियन क्लब युभेन्टसले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई केही समयअघि गरेको ‘अपमानजनक ट्वीट’को शानदार जवाफ फर्काएको छ । अघिल्लो महिनाबाटै यी दुई क्लबबीच सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमा ‘जुहारी’ चल्दै आएको थियो । केही समयअघि च्याम्पियन्स लिग खेलमा बार्सिलोनाले युभेन्टसलाई उसकै घरेलु मैदान टुरिनमा ०–२ ले हराउँदा सुरु भएको जुहारी क्याम्प नोउसम्म आइपुगेको छ ।
त्यसबेला लिओनल मेस्सीसहितको बार्सिलोनाले क्रिस्टियानो रोनाल्डोबिनाको युभेन्टसलाई उसकै घरमा हराएपछि बार्सिलोनाका कर्मचारीले क्लबको अफिसियल ट्वीटर ह्यान्डलबाट युभेन्टस र रोनाल्डोलाई ‘घोचपेच गर्दै’ ट्वीट गरेका थिए । बार्सिलोनाका कर्मचारीले मेस्सी गोट (ग्रेटेस्ट अफ् अल टाइम – सर्वकालीन महान्) खेलाडी भएको भन्दै ट्वीट गरेको थिए । सो खेल हुँदा रोनाल्डो भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराइरहेका थिए ।
रोनाल्डोबिनाको युभेन्टसलाई उसकै घरमा ०–२ ले हराएलगत्तै बार्सिलोनाले ट्वीटरमा लेखेको थियो– ‘हामी खुसी छौं कि, तिमीहरूले आफ्नै मैदानमा ‘गोट’ (ग्रेटेस्ट अफ् अल टाइम) लाई देख्यौ ।’
बार्सिलोनाले टुरिनमा युभेन्टसका खेलाडी, प्रशिक्षक, कोच, अफिसियल र समर्थकप्रति इंगित गर्दै मेस्सीको तारिफ गर्ने नाममा रोनाल्डोलाई होच्याउँदै ‘मेस्सीलाई देख्न पायौ, तिमीहरू धन्य भयौ’ भन्ने आशयको ट्वीट गरेको थियो । सो ट्वीटको निकै आलोचना पनि भयो । बार्सिलोनाले यस्तो विवादित ट्वीट गरेपछि त्यसबेला युभेन्टसले जवाफमा दोस्रो लेगमा आफूहरूले ‘वास्तविक गोट क्याम्प नोउमा लिएर आउने’ जवाफ दिएको थियो । युभेन्टसले त्यसबेला जवाफमा लेखेको थियो– ‘सम्भवतः तिमीहरूले गलत शब्दकोष हेरेको हुनुपर्छ । क्याम्प नोउमा हामी तिमीहरूका लागि वास्तविक गोटलाई ल्याउनेछौं ।’
यति जुहारीपछि दुई दिनअघि युभेन्टस दोस्रो लेग खेल्न बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा पुग्यो । अघिल्लोपटक रोनाल्डो थिएनन् भने यसपटक उनी थिए । बार्सिलोनाको टोलीमा यसअघि पनि मेस्सी थिए, यसपटक पनि थिए । तर, यसपटक कहानी बदलियो । बार्सिलोना आफ्नै घरमा युभेन्टसको हातबाट नमिठो हारको सिकार भयो । रोनाल्डोसहितको युभेन्टसले बार्सिलोनालाई ०–२ को जवाफमा क्याम्प नोउमा ०–३ ले धुलाइ गरेर छाड्यो । सोक्रममा रोनाल्डोले दुई पेनाल्टी गोल गरे । यसअघि बार्सिलोनाले युभेन्टसलाई ०–२ ले हराउँदा मेस्सीले पनि १ पेनाल्टी गोल गरेका थिए । तर, यसपटक मेस्सीको टिमलाई घरमै हराउँदा रोनाल्डोले २ गोल गरे ।
अघिल्लो खेलमा बार्सिलोनाको व्यवहारबाट बिच्किएका युभेन्टसका कर्मचारीले यसपटक बार्सिलोनालाई ढिला नगरी निकै शानदार र मिठो जवाफ उही स्टाइलमा फर्काए । खेल सकिएको केहीबेरपछि नै बार्सिलोनाको त्यही अपमानजनक ट्वीटमै जवाफ दिँदै युभेन्टसले क्याम्प नोउमा आफूहरूले वास्ताविक गोट ल्याएर देखाएको भन्दै गतिलो जवाफ दिएको छ । युभेन्टसले निकै सभ्य र मिठो गरी यसलाई आफूहरूले पहिला बाचा गरेअनुसार नै बाचा पूरा गरेको भनेको छ । बार्सिलोनाको अपमानजनक ट्वीटमा जवाफ दिनेक्रममा युभेन्टसले क्याम्प नोउमा गोल गरेपछि रोनाल्डोले आफ्नै स्टाइलमा सेलिब्रेसन गर्दै गरेको एक तस्बिर सँगै राखेर लेखेको छ– ‘हामीले हाम्रो बाचा पूरा गर्‍यौं: यसलाई (वास्तविक गोट) लिएर आयौं ।’
बार्सिलोनाको घरमा २ गोल गर्दा रोनाल्डोले व्यक्तिगत तीन दुर्लभ रेकर्ड बनाएका छन् । उनले आफ्नो करिअरभरमा कुनै पनि अवे मैदानमा सबैभन्दा बढी क्याम्प नोउमा गोल गरेको रेकर्ड बनाए भने बार्सिलोनाविरुद्ध सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीको दुर्लभ रेकर्ड पनि बनाए । यता, युभेन्टससँग ०–३ ले हार्दा बार्सिलोनाका नाममा भने क्लब इतिहासमै तीन खराब रेकर्ड बने ।
प्रकाशित मिति २५ मंसिर २०७७, बिहीबार २१:४७